RANTIISI SHAHAADADII UU RAJEYNAYAY WUU HELAY
Xaleey fiidkii, waxay diyaaradaha Israa’iilyiintu ay gantaallo la beegsadeen gaari uu saarnaa hoggaamiyihii cusbaa ee ururka islaamiga ee Xamaas Dr. Cabdicasiis Rantiisi, kadib markii uu ka yimid masjid uu ku soo tukaday salaaddii cishaha.
Rantisi & Axmed yasin
Weeraradaas waxaa ku dhintay Dr. Rantiisi iyo wiil uu dhalay oo la yiraahdo Maxammed iyo labo ka mid ahayd ilaaladiisa. “Dr. Rantiisi waxaa xagga laabta iyo qoorta ka soo gaaray dhaawacyo culculus, waxayna cusbitaalka Al-Shifaa soo gaareen iyagoo naftaba ka baxday” ayuu yiri Dr. Jumca oo shaleey u waramayay taleefishinka Al-jazeera. Shirqoolkan mid la mid ah waxaa bishii hore ee maarso 22-keedii lagu dilay Hoggaamiyaha Ruuxiga ee Xamaas Sh. Axmed Yaasiin, kadib markii uu salaaddii fajarka ku soo tukaday masjid ku yaalay isla magaallada Gaza ee daanta Galbeed. Labada hoggaamiyaba salaad kadib ayay adduunkan kaga tageen.
Shahaadada waa waxaan doonayay Kadib markii la dilay hoggaamiyihii hore ee Xamaas bishii hore Sh. Axmed Yaasiin, ayaa wargayska lagu magacaabo ee Al-Quds wareysi uu la yeeshay Dr. Cabdicasiis Rantiisi ku sheegay inuu ku taamayo inuu shahaado ku dhinto. Wargayska ayaa weydiiyay su’aashan “madaxda Yahuudda waxay magacaaga ku dareen kuwa ugu horreeya ee lala beegsanayo shirqool dil ah ee maxaad ka leedahay?? Dr. Rantiisi ayaa ku jawaabay “waxaan rajeynayaa inaan dhinto annigoo shahiid ah oo jidka Allah ku dhinta, ma doonayo in si kale aan u geeriyoodo, micno weyn iima lahan cabsi gelinta iigaga imaanaya Yahuudda, waxaan doonayaa inaan shahiido” ayuu ugu jawaabay Dr. Rantiisi oo ka mid ahaa asaasayaashii ururka islaamiga ee Xamaas.
Boqolaal kun ayaa ka qaybgalay aaskiisa
Maanta oo axad ah ayaa meydkii Shahiidka Dr. Rantiisi iyo kuwii kaleba ee weeraradii shaley ku dhintay lagu aasay Gaza, waxaana aaskii maanta ka soo qaybgalay dad tiradiooda kor u dhaafay 300 000 qof, halka kumanaan kale oo aad u badnaa muddaaharaadyo waaweyn isugu soo baxeen guud ahaan magaalooyinka daanta galbeed ee Falastiin, iyagoo ku hutaafayay in si degdeg ah loogu jawaabo Yahuudda.
Socodkii janaasada wuxuu ka billowday cusbitaalka Daaru-shifaa ee ku yaala Gaza, dabadeedna dadkii waxay u sii gudbeen guriga shahiidka oo ku yaalay xaafadda Sheekh Ridwaan, kadibna waxay sii qaadeen waddooyinka “waxda iyo jalaa” ee ku yaala bartamaha magaallada Gaza. Si aan sahlanayn oo waqti dheer qaadatay ayay dadkii xanbaarsanaa kafantii shahiidka Dr. Rantiisi ugu geliyeen gurigiisii si ay reerkiisii iyo caruurtiisii ay eegid-sagootin isha saas ugu mariyaan.
Intaa kadib, waxaa kafantii meydka loo gudbiyay masjidka weyn ee lagu magacaabo Al-Cumari kuna yaalla bartamaha Gaza, si loogu tukado salaaddii Janaazada. Subaxnimadii saakay laga soo billaabo waxaa masjidkii buuxiyay kumanaan kun oo dad oo ka kala yimid meelo kala duwan, si ay ugu tukadaan janaasada. Goobtii janaasada waxaa kalimad gaaban ka soo jeediyay Dr. Khaliil Al-xayyah kana mid ah hoggaamiyayaasha ururka Xamaas.
“ma ahan markii ugu horeysay uguna danbeysay ee Xamaas hoggaamiyayaasheeda ay sidan xaq-u-dirirka ugu geeriyoodaan, madaxda Xamaas weligood waxay daba joogi doonaan madaxda carbeed” ayuu yiri, wuxuuna intaas raaciyay isagoo dadweynihii caraysnaa la hadlaya “innaga weerar kasta oo nagu dhaca waxaan kororsanaynaa quwad iyo xoog Alle idinkiis, ururka Xamaas way awoodaan inay si is daba joog ah u soo saaraan madax kala duwan, ku kalsoonaada ururkiina haddaad tihiin dadweynihiinaan jihaadka ku jiroow” ayuu si xammaasad ku jirta u yiri. Waxyar kadib, waxay dadkii ku tukadeen salaaddii janaasada shuhuddadii geeriyootay, kadibna sidaas ayaa lagu aasay.
Dr Cabdicasiis Rantiisi wuxuu sanandkii hore ee 2003-kii bishii juun ka badbaaday shirqool ay Yahuudda ku doonaysay inay ku disho, wuu ka badbaaday shirqoolka, hase ahaatee waxaa ku soo gaaray isaga iyo wiil uu dhalay dhaawacyo khafiif ah, halka darawalkii gaarigii ay saarnaayeen uu dhintay.
KUMUU YAHAY DR. RANTIISI
Dr. Cabdicasiis Cali Cabdil-Xafiidh Ar-rantiisi wuxuu dhashay 23-kii bishii jannaayo sannadkii 1947. Wuxuu ku dhashay tuullo lagu magacaabo Biinaa, una dhaxaysa Casqalaan iyo Yaafaa. Qoyskii Rantiisi waxay u soo qaxeen sannadkii 1948-kii magaallada Gaza, kadib markay Yahuudda xoog ku qabsatay dhulka Falastiin, waxayna markii danbena degeen xerada qaxootiga ee Khaan Yuunus. Waqtigaas iyada ah wuxuu Rantiisi jiray 6 sanno iyo billooyin.
Dr. Rantiisi wuxuu ku soo dhex barbaaray 9 wiilal iyo 3 gabdhood oo ay walaalo ahaayeen. Markuu jiray lix sanno wuxuu billaabay dugsi ay lahaayeen hay’ad gargaar ah, waxayna duruufta reerkiisii ku yimid ku kelliftay isagoo 6 jir ah inuu shaqo billaabo, si uu markaas qoyskiisii caruurta badnaa xoogaa dhaqaale ugu soo saaro.
Wuxuu Dr. Rantiisi yaraantiisii aad ugu fiicnaa xagga waxbarashada, wuxuuna waqti yar gudahood ku dhammeeyay dugsiga sare ee waxbarashada sannadka markuu ahaa 1965-kii, wuxuuna intaas kadib waxbarasho ugu kicitimay magaallada Iskandariya ee dalka Masar si uu u billaabo waxbarashadiisii jaamacadeed, gaar ahaan maaddada dhaqtarnimada.
Sanandkii 1971-kii wuxuu natiijo sare ugu guuleystay jaamacaddii uu dhiganayay, wuxuuna isagoo dhaqtar ah ku soo laabtay magaallada Gaza si uu uga shaqeeyo cusbitaal ku yaallay Khan yunus. Inkastoo uu dhibaatooyin kala kulmay inuu dib ugu laabto dalka Masar si uu u soo diyaariyo risaalada Majasteerka, haddana ugu danbayntii waxaa u suurtoowday inuu markale Iskandariya aado wuxuuna sidaas ku helay risaalada majasteerka, gaar ahaan daaweynta cudurrada caruurta.
Sanandkii 1976-kii wuxuu markale ku noqday shaqadiisii cusbitaalka Naasir ee ku yaallay Khan Yunus. Dr Cabdicasiis wuxuu lahaa xaas iyo 7 caruur ah, 2 wiilal iyo shan gabdhood. Waxaa jira 10 caruur uu awoow u yahay, oo ay dhaleen caruurtiisa.
Laga soo billaabo sannadkii 1986-kii wuxuu wax ka dhigayay Jaamacadda islaamiga ee ku taalla Gaza, inkastoo markii danbe ay ciidamada Israa’iil ay ka joojiyeen shaqadii uu ka shaqeenayay. Markii ugu horeysay ee lagu dhawaaqay ururka islaamiga Xamaas sannadkii 1987-kii wuxuu Dr. Rantiisi noqday qofkii ugu horeeyay ee la xiro kadib markii la aasaasay ururka Xamaas. Wuxuu ku biiray ururka islaamiga ee Al-ikhwaanul-muslimuun ee ka jiray Gaza
Sannadkii 1988-kii bishii jannaayo 15-keedii ciidamada israa’iiliyiinta waxay xireen Dr. Rantiisi, isagoo xilligaas xabsiga ku jiray 21 maalmood. Bil kadib markii la soo daayay ayaa misna la xiray, wuxuuna markan danbe xirnaa ilaa 2 sanno iyo bar, waxyaabihii lagu eedeenayay waxay ahaayeen inuu ka danbeeyay ururkii uu wax ka aasaasay ee Xamaas. Sannadkii 1990-kii bishii sibteembar 4-teedii ayaa markale la soo daayay. Intaa kadib, haddana waxay markale ciidamada Yahuudda xireen Dr. Rantiisi boqol maalmood kadib markii la soo daayay, isagoo xirnaa hal sannoo kale.
Sanandkii 1992-kii bishii diseembar 17-keedii Dr. Rantiisi iyo dad kale oo tiradooda gaarayay 416 qof oo isugu jiray xubno ka tirsanaa ururka Xamaas iyo jihaad waxaa loo musaafiriyay koonfurta Lubnaan, wuxuuna waqtigaas Rantiisi noqday afhayeenka dadkaas.
Markuu ku soo noqday daanta galbeed ayaa markale Dr. Rantiisi la xiray, waxayna maxkamadda israa’iil ay ku xukuntay 3 sanno iyo bar, waxaana la soo daayay sannadkii 1997-kii bishii 4-aad 21-keedii kadib markii uu dhamaystay waqtigii xukunkiisa. Muddadaas la soo daayay, markay ka soo wareegatay qiyaastii sannad u dhowaad waxaa misna xabsiga u taxaabay Rantiisi ciidamada maamulka Falastiin ee uu madaxweynaha yahay Yasir Carafaat, waxayna ku beegnayd waqtigaas 04/10/1998-kii, wuxuu xabsigaas ka soo baxay 15 billood kadib, iyadoo sababaha looga soo daayay xabsiga ay ahayd geerida ku timid hooyadiis.
Sannadkii 1990-kii intuu xabsiga kula jiray Sheekh Axmed Yaasiin waxaa Dr. Cabdicasiis Rantiisi u suurtogashay inuu quraanka kariimka dhammaantiis xifdiyo, sidoo kale wuxuu kaloo leeyahay qasiidooyin ama gabayo uu tiriyay markii uu ku sugnaa xabsiga. Dhinaca kale, wuxuu si joogto ah maqaallo iyo qoraallo ugu qori jiray wargaysyada caalamiga ee ku soo baxa afka carabiga.
Dr. Cabdicasiis Rantiisi waxaa bishii hore 23-keedii loo doortay inuu hoggaamiye u noqdo ururka Xamaas, kadib markii la dilay hoggaamiyaheedii ruuxiga sh. Axmed Yaasiin. Maanta oo axad ah tr. 18/04/2004 waxay markale ururka islaamiga ee Xamaas magacawday hoggaamiye cusub oo aan magaciisa la magacaabin, iyadoo danta laga leeyahay ay u badan tahay amaanka awgeed.
Haddaba, ugu danbeyntii waxaa hubaal ah inuu Dr. Rantiisi ku guuleystay yiddiddiilladii uu noloshiisoo idil ku taamayay inuu gaaro, taasoo ahayd inuu dunidan ku dhamaysto isagoo jidka Allaah ee uu raalliga ka yahay ku dhinta.
Tarjamadii: Ibraahim Saalax